ग्यास लि क भएर आगलागी हुँदा एक जनाको मृ त्यु, किन पड्किन्छन् ग्यास? कसरी गर्ने सुरक्षा । पुरा पढ्नुहाेस
विराटनगर २ शनिहाटमा शनिबार राति ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा एक वृद्धको मृ त्यु भएको छ ।
मृ त्यु हुनेमा अन्दाजी ७० वर्षीय जेष्ठ नागरिक जयप्रसाद दाहाल छन् । काठमाडौं बसोबास गर्दै आएका उनी केही दिनअघि विराटनगर आएका थिए ।
एक्लै बस्दै आएका उनी आइतबार बिहान जले को अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । घटना शंका स्पद भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी राजकुमार खिइजूका अनुसार ग्यास लि क भएर आग लागी भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । घटनास्थलमा ग्यासको पाइप जलेको अवस्थामा कोशी ग्यासको सिलिण्डर छ ।
आइतवार बिहान दाहाललाई भेट्न राधेश्याम दराक आएका थिए । जयप्रसादले ढोका नखोलेपछि छिमेकी बोलाएर हेर्दा जले को अवस्थामा श व भेटिएको थियो ।
किन पड्कि न्छन् ग्या स? कसरी गर्ने सुरक्षा
खाना पकाउने ग्यासको उपभोग वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यो पड्कि ने घटना समेत बढ्दै गएको छ। गत पुस ५ गते बीरगंजस्थित सुपा ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा दुई जना अग्नी नियन्त्रकको मृ त्यु भयो। सो उद्योगमा ग्यास लि क भई आगलागी भएको थियो।
गत पुस ७ गते धादिङको गल्छीमा पुरानो एलपी ग्यास पड्किदा एक घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भयो। गत वर्षको फागुनमा ग्यास सिलिण्डर पडकिँदा एक जना प्रहरी जवानको मृ त्यु भयो भने आठ जना घाइते भए।
त्यस्तै गत वर्षको असारमा ललितपुरको हौगालमा ग्यास सिलिण्डर पडकिदा ३ जनाको मृ त्यु भयो भने अर्की एक जना गम्भीर घाइते हुनुपर्यो।
तर हालसम्म ग्यास पड्किएर ज्या न गुमाउनेको यकिन संख्या भने आधिकारीक निकायसँग छैन।
त्यस्तै ग्यास सिलिण्डर पड्किएसँगै त्यसको छानविन गर्न बनेका समितिहरुले विभिन्न प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरेपनि त्यस्ता घटनाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायका बारेमा भने आम उपभोक्तामा चेतनाको कमी देखिन्छ।
किन पडकिन्छन् ग्यास?
गोइतको भनाईमा यसबाहेक कमसल तथा गुणस्तर प्रमाणित नभएका चुल्हो, रेगुलेटर, रबर पाइप जस्ता उपकरणका कारण पनि त्यसता घटना हुने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै लामो समयसम्म सिलिण्डर बिना प्रयोग राखीराख्ने जस्ता कार्यले समेत सुरक्षाको जोखिम निम्ताउन सक्ने उनले जनाए।
‘हामी कहाँ ग्यास स्टकमा राख्ने प्रवृति छ। कैयौं वर्षसम्म त्यसरी स्टकमा रहीरहने तर प्रयोगमा नआउँदा समेत त्यसले जोखिम बढाउने गर्छ।’ उनले भने।
एउटै भान्सामा दुई वटा सिलिण्डर सकेसम्म नराख्नुहोस्। एकातिर खाना पकाइरहँदा अर्को सिलिण्डरबाट ग्यास लिक भएमा त्यो निकै जोखिम हुन्छ।
सकेसम्म सिलिण्डरलाई साइडमा आधार दिने गर्नुहोस्। ताकि भुइँचालो जाँदा हुने कम्पनबाट सिलिण्डर नढलोस्। त्यसका लागि कुनो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिलिण्डरलाई कहिलै पनि ढलाएर वा कोल्टो पारेर नराख्नुहोस्।
सिलिण्डर भन्दा कम्तीमा ६ इन्च माथि ग्यास चुलो राख्नुहोस्। कहिलै पनि चुलोभन्दा सिलिण्डर माथि राख्नु हुँदैन। त्यस्तै ग्यासको रबर पाइप १.५ देखि २ मिटरभन्दा लामो हुनु हुँदैन्।
सिलिन्डरमा ग्यास सकिनासाथ भान्साभन्दा बाहिर राख्ने गर्नुहोस् वा सम्वन्धित विक्रेतालाई बुझाउनुहोस्। पुराना सिलिण्डर प्रयोग नगर्नुहोस्।
यस्ता ग्यासको सुरुमा ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा अक्षर लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि १६, १७, २०, २२, २५ आदि अंकहरु लेखिएको हुन्छ। यसकै आधारमा सर्वसाधारणले सिलिण्डरको म्याद थाहा पाउन सक्छन्।
ए, बी, सी र डीले अंग्रेजीका क्रमशः ३–३ महिना जनाउँछ। एले जनवरी, फेबरुअरी र मार्च महिना जनाउँछ भने बीले अप्रिल, मे, जुन महिनालाई जनाउँछ। सीले जुलाई, अगष्ट र सेप्टेम्बर तथा डीले अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनालाई जनाउँछ।
एउटा सिलिण्डरको म्याद १० वर्षसम्म हुन्छ। १० वर्षपछि हाइड्रोलिक टेष्ट गर्नुपर्ने र ५ वर्ष म्याद थप्न सकिन्छ। तर ग्यास उद्योगहरुले भने हाइड्रोलिक टेष्टको मापदण्ड अवलम्वन नगरेको समेत पाइने गरेको छ।
हाइड्रोलिक टेष्ट गरेपछि सिलिण्डर नचुहिने पाइयो भने मात्रै त्यो सिलिण्डर पुनः ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने नत्र कवाडीमा दिनुपर्ने हुन्छ। सिलिण्डरको म्याद सकिएपछि वा बीचमै चुहावट भएमा त्यसलाई मर्मत तथा वल्डिङ गरेर प्रयोग गर्न पाइँदैन।